5 Makuru SEO Maitiro Anotambudza Vaimbi Vanogona Kushandisa | Martech Zone
Saka iwe uri muimbi uyo ari kutsvaga kuti ataure online uye iwe uri kufunga nezvekuita yekutsvaga injini optimization (SEO) matekiniki akushandire iwe? Kana zvirizvo, saka rairwa kuti, nepo pasina mashiripiti bara pakutsvaga injini yekugadzirisa, zvakare hazvisi zvakaoma kuvandudza kutsvagiridza kwako mukati meGoogle neBing.
Heano mashanu anoshanda SEO matekiniki evaimbi ekuvandudza yekutsvaga injini kuoneka.
Kubhuroka inzira yakanaka yekuonekwa neinjini dzekutsvaga. Ingo ita chokwadi chekuti webhusaiti yako yakanyoreswa neinjini huru (Google, Yahoo!, Uye Bing) saka ivo vanoziva kukambaira vakakomberedza yako saiti uye kunongedzera zvawakatumira
Paunobloga, ive shuwa kushandisakeyword-yakapfuma zvemukati (ingori buzzphrase zvinoreva kuti "shandisa mazwi akakosha kazhinji mune zvako zvemukati"). Semuenzaniso, kana iwe uchibloga nezve bass clarinet, zvakanakisa kushandisa chirevo "bass clarinet" mune musoro uye kakati wandei mune zvirimo.
2. Shandisa Google Authorship
Kana iwe uri kubloga (uye iwe unofanirwa kuve, ona pamusoro) nezvezvinhu zvine chekuita nemumhanzi (chiridzwa chako, mimhanzi mikuru, mabhendi matsva kana ane simba, vanyori vakuru, nezvimwewo) saka ndiwe, nekutsanangurwa, munyori. Asi iwe unofanirwa kuenda kupfuura kungova munyori uye uve a Google Munyori.
Kuita kuti izvo zviitike, iwe tanga watoda Google + account (zvakachengeteka kutaura kuti kungova neGoogle + account kuchakubatsira neSEO zvakare, nekuti Google+ zviri pachena chigadzirwa cheGoogle). Mune yako nhoroondo yeGoogle + nhoroondo, iwe uchaona "Anopa kune" chikamu pasi pe "Zvinongedzo." Ita shuwa kuti unozadza ma URL nemazita emawebhusaiti iwe paunonyora (ita shuwa kuisa rako rako blog).
Zvakare, pese paunonyora chinyorwa, ita shuwa kuti pane tag yekubatanidza mumusoro wepositi iyo inonongedzera yako Google+ account. Zviripachena, iwe unotsiva "Google+ ID" neID yako chaiyo.
3. Shandisa mifananidzo yako
Mikana yakanaka kwazvo kuti zvemukati zvako zvinosanganisirawo mifananidzo. Kana zvirizvo, saka pese paunopinza chifananidzo mune zvako zvemukati, iwe unofanirwa kusanganisira tsananguro yemufananidzo mune izvo "alt" hunhu. Aya ndiwo maratidziro aunoita "kutsvagisa injini zviri mumufananidzo; ivo havana kungwara zvakakwana kuti vakwanise kuona mifananidzo yese nekungo pixellated zvemukati. Inzwa wakasununguka kushandisa mazwi ako mune iyi rondedzero zvakare.
4. Shandisa Youtube
Unoda kucherechedzwa munzvimbo dzisiri blog rako, handiti? Kuti izvozvo zviitike, iwe unozofanirwa kuburitsa zvemukati munzvimbo dzisiri blog rako. Youtube inzvimbo yakanaka yekuburitsa zvemukati mevhidhiyo, kunyanya kana iwe uchida kuratidza hunyanzvi hwako hwekupenga pane chimwe chimbo
Kupfuurirazve, iwe unogona kupinza yako Youtube mavhidhiyo zvakananga mubhurogi rako. Izvi zvinogona kunyatso kusimudzira yako blog zvemukati (heino a muenzaniso wakanaka). Ive neshuwa yekumaka vhidhiyo neaya mazwi akakosha atanga tichitaura nezvawo, futi.
5. Shandisa Google Analytics
Google Analytics inzira yakanaka yekutevera kushanda (kana kusabatana kusakwana) kwemaitiro ako ekugadzirisa. Ita shuwa kuti yako blog yakanyoreswa neGoogle Analytics. Shanyira iyo kazhinji uye ona izvo zvinotyaira traffic kune yako saiti. Iwo wakareruka mutemo apa ndewekuti: chero chiri kushanda, ita zvakawanda zvacho uye chero zvisiri kushanda, rega kuzviita. Zvakareruka, handiti?
Tags: muimbi seoSearch Engine Optimizationseo
Uchishandisa Yemagariro Midhiya Yekutungamira Chizvarwa